Sharciga: Pear gardaro waa halis iyo sharci darro | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Sharciga Aargudasho Porn
Muuqaal cusub oo isdaba-saar ah oo la xidhiidha sexting waa "porno aargoosi". Waa qaybinta internetka ee sawirada naas-nuujinta iyo sawir-qaadka iyada oo aan la helin oggolaansho si loo dardar-galiyo loona dhaawaco bartilmaameedyada, inta badan dumarka. Dadku waxay badanaa ku arkeen inay adag tahay in sawirro laga qaado internetka. Meelo badan oo sawirada lagu martigeliyay waxay ku saleysan yihiin meel ka baxsan Boqortooyada Midowday (UK), waxayna codsaneysaa in laga saaro waxyaabo badanaa la iska indho tiray
Bishii Abriil 2017, sharciga cusub ee kufsiga loola jeedo ee Scotland ayaa dhaqan geliyey hoos Habdhaqanka Xadgudubka iyo Sharciga Dhibaatooyinka Galmada 2016. Ciqaabta ugu sarreeya ee la soo bandhigo ama lagu hanjabayo in la soo bandhigo sawirka ama fiidiyaha gacanta waa 5 sano oo xabsi ah. Dembiga waxaa ka mid ah sawirada laga qaaday qolka gaarka loo leeyahay halka qof uu ku dhacay ama uu dharbaaxay ama muujinaya qof ku hawlan fal-galmo.
Xadgudubka aargoosiga sidoo kale waa dembi ciqaabeed ee England iyo Wales. Israa'iil waxay ahayd dalkii ugu horreeyay ee adduunka ku nool si sharci darro ah looguna daweeyo sida dambi galmo. Ciqaabta, haddii la xukumo, waxay ku xiran tahay 5 sanado xabsi ah. Brazil ayaa sidoo kale soo bandhigtay hindise sharci darro ah. Dalka Mareykanka, New Jersey iyo California ayaa hogaaminaya hogaanka. Kanada gudaheeda, gabadh 17 ah oo gabdho ah ayaa lagu xukumay inay haysato filimmo fara badan oo caruurta ah kadib markii ay soo bandhigtay sawirro nud ah oo saaxiibteed hore ee wiilka saaxiibtiis ah ee ku habboon hinaasada.
Khayraadka ku caawinaya waxaa ka mid ah Khadka caawimada ee aargoosiga ah iyo Gargaarka Dumarka Iskotishka.
<< Yuu Sameeyaa Wasmada? Kacsiga Dambiyada >>